သင်ဒီမှာပါ: Home / ကမ္ဘာ့ Solutions နို့တိုက်ကျွေးမှု / အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန်ကမ္ဘာ့ Feed ရနိုင်မလား?
အညိုရောင်ဆန်, germinated အညိုရောင်ဆန်နှင့်ဆန်ဖြူအကြားကွာခြားချက်များ
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ဆန်ဖြူက processing အတွက် 10% loosing ဖြစ်ကြောင်းသိသလား မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်!
ဤသည် 43 သန်းပေါင်းများစွာတန်ချိန်အပို ... ကျွန်တော်နီးပါး 287 သန်းပေါင်းများစွာတစ်စုံလင်သောကမ်ဘာပျေါတှငျပိုမိုပုဂ္ဂိုလ်များအစာကျွေးနိုင်ဟုဆိုလိုပေသည်!
1 အခွအေန - အဘယျသို့ဆန်နှင့်အတူတွင် Going သည်
2 စိန်ခေါ်မှု - Brown ကဆန်ဟင်းချက်
3.1 ကိုးကား - အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန်ကမ္ဘာ့အပိုဒ် Feed ရနိုင်ပါသလား
အခွအေန - အဘယျသို့ဆန်နှင့်အတူတွင် Going သည်
တစ်နှစ်လျှင်ကိုလောင်ပျမ်းမျှဆန်အာရှတိုက်မှာလူတဦးနှုန်း 300 ပေါင်ဖြစ်ပါသည်
10% 43 သန်းပေါင်းများစွာတန်ချိန်ကြောင်းနံပါတ်များအတွက်
စိန်ခေါ်မှု - Brown ကဆန်ဟင်းချက်
အချို့သောဒါအကျိုးရှိသောမဟုတ် nutriments လျှော့ချ
ဆန်ဖြူနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ germinated အညိုရောင်ဆန်အာဟာရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ကိုးကား - အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန်ကမ္ဘာ့အပိုဒ် Feed ရနိုင်ပါသလား
မူရင်းဆောင်းပါးကနေ PDF ကိုအတွက်တော့ဘူးမရရှိနိုင် အများဆုံးအထွက်နှုန်း site. However you can still read the same article on line (no PDF) : ” အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဆန် Hunger စေရန်အဆိုပါအဖြေဖြစ်ပါသည်! "
အဆိုပါ၏အားသာချက်များအချို့ germinated အညိုရောင်ဆန်: တန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ဆန် product အဖြစ် germinated အညိုရောင်ဆန်: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု
မှတ်ချက် - ဆောင်းပါးရေးသားသူ Peggy Bradley ဖြစ်ပါတယ်။ Bravo Peggy! စာရင်းဇယားတွေအများကြီးနှင့်အတူတကယ်ပဲကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး!
ငါကအင်တာနက် archive ကိုအနေဖြင့်မူလဆောင်းပါး, သာစာသား, ထွက်တူးဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ #2 ကိုကြည့်ပါ: